ग्लोबल ईएसपी ईमेलभिसनले सोशल मीडिया प्लेटफर्म उद्देश्य मार्केटर खरीद गर्दछ
शुक्रबार, जनवरी 14, 2011 बिहीबार, जुन 9, 2016 Douglas Karr
गत वर्ष यी दुबै कम्पनीमा नेताहरूसँग भेट गरेर काम गर्ने आनन्द हामीले पाएका छौं। ईमेलभिसन र उद्देश्य मार्केटर। मैले यस वर्षको सुरुमा ईमेलभिसनमा रिपोर्ट गरें किनभने म उनीहरूको साथ प्रभावित थिएँ अन्तर्राष्ट्रियकरण प्रयास। तिनीहरूको अनुप्रयोग मात्र ग्लोबल होईन, त्यसैले समयक्षेत्रहरू पनि हुन् ... ग्राहकहरूको लागि सम्पूर्ण तरिका!
कम्पनीले वर्षको बर्षमा %०% भन्दा बढि बृद्धि अनुभव गरिरहेको छ र छिटो दक्षिण अमेरिका र एशियाभरको बजारमा छिट्टै बढिरहेको छ, युरोपमा पहिलेदेखि नै ठूलो बजार सेयर पछि। संग हिस्पैनिक ईमेल मार्केटिंग संयुक्त राज्य अमेरिकाको बृद्धिमा, ईमेलभिसनले ईएसपीलाई संयुक्त राज्य अमेरिकामा उनीहरूको पैसाको लागि एक रन दिन राम्रोसित राखिएको छ। उनीहरूले आफ्नो ईन्टरफेस मार्फत प्राय: मातृभाषालाई मात्र समर्थन गर्दैन, उनीहरूलाई तिनीहरूको खाता व्यवस्थापन र ग्राहक सेवा स्टाफले उनीहरूलाई समर्थन गर्दछ।
हामीसँग बृहत् प्रदर्शन अवलोकन गर्ने अवसर पनि थियो उद्देश्य मार्केटर संस्थापक अमिता पॉल बाट सीधा। अमिता एक अद्भुत प्रतिभा हो - र कसरी मार्केटर्सले डाटा प्रयोग गरिरहेका छन् र उनीहरूले यससँग कसरी ट्र्याक गर्नु पर्छ बुझ्दछन्। उद्देश्य मार्केटर एक उपकरण हो जुन कम्पनीहरूले उनीहरूको सबै सामाजिक मिडिया कुराकानीहरू समन्वय गर्न र ट्राफिक सीधा तिनीहरूको साइटहरूमा ट्र्याक गर्न प्रयोग गर्दछ। यो एक विश्वव्यापी उपकरण हो जुनसँग ट्विटर, फेसबुक, Ping.fm सँग समाहित छ ... अवसरको साथ जोड्नु जुनसुकै सामाजिक माध्यम पछि आउँछ। यसले गाई कावासाकी एक बोर्ड सदस्य हो भनेर पनि मद्दत गर्दछ!
हामीले भर्खरै सिकेका छौं (नयाँ रिब्रेन्ड गरिएको) ईमेलभिसनले उद्देश्य बजार खरीद गर्‍यो! यी टेक्नोलोजीहरू बीचको साझेदारीले कुनाको वरिपरि भण्डारमा रहेको देख्न यो रोचक हुनेछ!
दुबै संगठनलाई बधाई छ। फ्रान्सको क्लिचिमा निक हिस र उनको टोली केहि आश्चर्यजनक मान्छे हो र उनीहरुको कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा यस ठाँउमा ट्रेल बज्दै छ। अमिताको दर्शनसँग यो प्रतिभाको संयोजन साँच्चै रोमाञ्चक छ! यदि सही तरिकाले गरियो भने, म पक्का निश्चित छु कि ईमेलभिसन केहि बर्षहरूमा विश्वको सब भन्दा ठूलो ईमेल सेवा प्रदायक हुन सक्छ।
टैग: ईमेलईमेलभिसननिक heysउद्देश्य बजारसामाजिक संजालसामाजिक मिडिया अनुगमन